Ostarine MK-2866 रिफ्लेक्स ल्याब्स द्वारा | 10mg | Caps ० क्याप्सुलहरू
नियमित मूल्य £ 38.99
वा weekly साप्ताहिक ब्याज-मुक्त भुक्तानबाट £ 6.49 संग
Ostarine के हो (MK-2866)?
एक अलराउन्डर जुन एक्लै प्रयोग गर्न सकिन्छ वा स्ट्याक्ड गर्न सकिन्छ। -4-१२ हप्ता सम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ र प्रयोगकर्ताहरूले दुब्ला, सुक्खा मांसपेशीहरू निर्माण गर्दछन् र शरीरमा बोसो प्रदान गर्ने आहारमा पनि ध्यान दिइने कमी आएको देख्न सकिन्छ कि भनेर जाँच गर्न सकिन्छ। खुराक प्रति दिन mmg-२mmg बाट हुन सक्छ र 12 हप्तामा 5kg मांसपेशी लाभको परिणाम प्राप्त गर्न सकिन्छ।
Ostarine (MK-2866), एकै समयमा मांसपेशिहरू निर्माण र शरीरको बोसो जलाउन विश्वको सबैभन्दा मनपर्दो विकल्प, हालका समयमा सबैभन्दा लोकप्रिय सेलेक्टिव Androgen रिसेप्टर मोड्युलेटरहरूमध्ये एक भएको छ।
दुबला मांसपेशीहरूको समूहलाई जितेर र शरीरको फ्याटलाई MK-२2866 with fighting सँग लडेर आफ्नो शरीरलाई पुनः परिभाषित गर्नुहोस्!
Ostarine का लाभ (MK-2866)
छोटो अवधिको समयमा आश्चर्यजनक परिणामहरू उत्पादन गर्दछ।
Ostarine (MK-2866) कसरी प्रयोग गर्ने?
Ostarine (MK-2866) पुरुषबाट 8-१२ हप्ता र महिलाले 12-- women हप्ताको चक्रमा उत्तम रूपमा प्रयोग गर्दछ जबकि यो व्यक्तिगत प्राथमिकता र चक्र आवश्यकताहरूको अनुसार फरक हुन सक्छ।
पुरुषहरूको लागि Ostarine (MK-2866) को सिफारिश गरिएको खुराक काटने चरणको समयमा (प्राथमिक रूपमा workouts अघि र खाना पछि।) आठ देखि बाह्र हप्ताको लागि १-15-२25mg को बीच हो। बल्कि p चरणहरूको लागि, पुरुषहरूको लागि ओस्टारिन (एमके -२30) को सिफारिश गरिएको खुराक आठदेखि बाह्र हप्ताको अवधिमा (प्राथमिकतामा वर्कआउटको and०-40० मिनेट पहिले र खाना पछि।) १-2866-२15mg हो।
महिलाका लागि Ostarine (MK-2866) को सिफारिश गरिएको खुराक प्रत्येक दिन 5-१०mg हो (अधिमानतः outs०-30० मिनेट workouts अघि र खाना पछि) छ देखि आठ हप्ताको चक्रमा।
यस SARM को आधा जीवन २०-२20 घण्टाको आसपास हो र यसैले दिनको एक पटक डोजिंग ठीक छ।
MK-२2866AR SARMs जस्तै S4 (Andarine) र Cardarine (GW-501516) लाई काट्नको लागि र MK-677, LGD-4033, र RAD-140 (टेस्टोलोन) सँग बल्किंगका लागि उत्तम स्ट्याक गरिएको छ।
एमके -२2866 of को उपयोग गर्ने शक्ति एथलीटहरू र बॉडीबिल्डर्सले क्षतिपूर्तिको सन्दर्भमा नाटकीय लाभहरू रिपोर्ट गरेका छन्। यो मुख्यतया किनभने ओस्टाबोलिकले शरीरको बोसो गुमाउन र एकै समयमा मांसपेशीहरूको मद्दत गर्न मद्दत गर्दछ।
प्रयोगकर्ताहरूले लिफ्टि of प्रदर्शनको शर्तमा उल्लेखनीय लाभ र सुधारहरू पनि रिपोर्ट गर्छन्।
MK-2866 मध्यम ग्राउण प्रशिक्षणमा अवरुद्ध भएका व्यक्तिहरूको लागि आदर्श मानिन्छ जहाँ उनीहरू कि त उनीहरूले चाहेको बल वा मांसपेशीको आकार उनीहरूले आशा गर्न असमर्थ छन्।
मांसपेशीहरु लाई गुरुत्वाकर्षण, प्रतिरोध, वा दुबै लाई हटाउन ठूलो शक्ति उत्पन्न गर्न मद्दत गर्दछ।
हड्डी, कन्डरा र अस्थिबंधनको सर्तमा लाभहरू प्रयोगकर्ताहरूले दिनको १२.mmg भन्दा कम खुराकमा रिपोर्ट गरेका छन्।
दुबै जान र लिफ्ट सुधार गर्न Get० देखि percent 30 प्रतिशत सम्म सुधार गर्नुहोस् जबकि दुबै मांसपेशीहरूको १०-१-53 एलबीएस प्राप्त गर्दै।
हामी यस उत्पादनको साथ एक मिनी PCT सिफारिस गर्दछौं, 4-6 हप्ता उपयुक्त छ।
169 समीक्षाहरूमा आधारित
99% समीक्षकहरूको एक साथीलाई यो उत्पादन सिफारिस गर्दछ
टिम डी Reviewed by Tim D.
रायन एस र्यान एस द्वारा समीक्षा गरिएको